Dibadbaxyo ka dhan ah musaafurinta Afgaanistaaniyiinta oo magaalooyin badan ka socdaan | Somaliska
Dibadbaxyo ka dhan ah musaafurinta Afgaanistaaniyiinta oo magaalooyin badan ka socdaan
Magaalooyinka Linköping, Jönköping, Luleå, Stockholm iyo Göteborg ayaa waxaa ka socda banaanbaxyo loogaga soo horjeedo musaafurinta dhalinyaradda afgaanistaaniyiint, kuwaas oo dowladda Iswiidhan ay heshiis dib loogu celinayo la gashay Afgaanistaan.
Boqolaal dadka reer Afgaanistaan oo u badan dhalaan keli socod ah ayaa iskugu soo baxay Olof Palmes plats ee magaaladda Göteborg, kuwaas oo cabasho ka muujinayey go’aanka dowladda Iswiidhan.
“Waxaanu dooneynaa in la joojiyo u musaafurinta Afgaanistaan, waxaanu leenahay han si kasta oo aanu u daalno, waxaanba helnaa taageero ay noo muujiyaan dadka reer Sweden” ayey yiraahdeen Arif Moradi, Hamid Saadat oo labaduba ah afhayeenka banaanbaxayaashaasi.
Afhayeenka u hadlay kooxdan ayaa sheegay in aaneey dad badan la socon xaalka dhabta ah ee ka jira Afgaanistaan. Intuu uu banaanbaxan socday ayaa dhalinyaradda banaanbaxayaasha ahi waxeey halkaasi ku soo bandhigeen wax u eg riwaayad oo ah in mid ka mid ah dadka la celiyo uu heeysto oo keliya labbo fursadood taas oo ah in la duugo ama uu ku biiro kooxaha argagaxisadda ah.
“Afgaanistaan ma ahan meel amaankeedu sugan yahay, tan ugu adigi waxaa weeye marka qofka laabto” ayey tiri Zahra Samadi, oo ka hadleeysay goobta, iyadoo misna hadalka ku dartay intaa in dadka la celiyo ay labbo daran mid dooro heeysato una dheertay bulshadda oo aan aqbaleeyn.
Ugu dameyntii waxaa Zahra ay hawada u dirtay shimbirta qooleeyda ah oo ay sheegtay ineey astaan nabad u noqoto dadka tarxiilka fadhiya iyo kuwa dalka dib loogu celiyey.
“Jaceyl iyo tixgelin” ayuu yiri Hamid Saadat, oo isaguna ka mid ah qaban qaabiyaasha banaanbaxaasi oo isna markiisa diidaayey shimbirtii ugu dambeeysay ee qooleeyda aheyd isagoo ku sheegay ineey tahay astaan nabadeed oo ka dhaxeeysa shucuubta caalamka iyo dadkii ku taageeray banaanbaxan.